Azo atao ve ny manasa ny lay ao anaty milina fanasana?
Toby iray dia toetoetran'ny fitaovana fizahan-tany. Lasa toeram-ponenana vonjimaika izy mandritra ny dia an-tongotra na toerana fitsangatsanganana ho an'ny mpizaha tany iray na maromaro. Na izany aza, amin'ny alalan'ny asa mivaingana, ny lay dia afaka mahazo akanjo tsy mahafinaritra ary lasa maloto. Ny hany vahaolana dia ny fanasana. Koa, ahoana ny fomba hanasana tsara ny tranolay ary inona no fitsaboana tokony ampiasaina? Momba ity eto ambany ity.
Ahoana ny fomba hanasana lamba lay ao anaty milina fanasana?
Rehefa jerena ny zava-misy dia tena sarotra ny manasa izany amin'ny tananao. Zavatra iray sisa tavela - basy milina. Nefa eto indray dia misy vato mahatafintohina. Ny singa fototra ao amin'ny tranolay dia ny famintinana azy manokana amin'ny fananana rano fanodinana rano. Miaraka amin'ny fahasimbana sy ny mari-pana avo dia mety hamongorana ny tontolon'ny fiarovana ary ny tavy dia tsy afaka manatanteraka ny asa fototra intsony - hiaro azy amin'ny orana. Raha ny lojika dia mitranga ny fanontaniana: azoko atao ve ny manasa ny lay ao anaty milina fanasana ? Eny, azonao atao raha manaiky fepetra maromaro ianao. Voalohany ary tena manan-danja indrindra - mametra ny fomba fanasan-tongotra mamy ary mametraka ny hafanana farafahakeliny (ho an'ny 40 degre ambanin'ny machine). Amin'ny maha-mpanadio azy, dia ampiasao ny akanjo amin'ny akanjo na vovoka kely ho an'ny zavatra miloko. Tsindrio ny tranolay dia tsy ilaina, mba tsy hanimbana ny ravin-drano. Manaingo lamba maloto amin'ny masoandro ary avelao hivoaka.
Mandritra ny fanasana dia mbola mihosin-drivotra foana ilay milina, ka raha toa ka miharatsy ny tranolay. Raha te ho voaro ianao, dia sasao amin'ny tranolay ny tranolay. Tokony hatao izao manaraka izao:
arotsaka ao amin'ny efitrano fandroana ny rano fisotro madio;
tranoy ny tranolay mandritra ny 15 minitra;
Miankohofa eo an-tongotrao, mandondòny vilany;
votso tsara amin'ny rano madio;
mihantona ao amin'ny toerana mamirapiratra.
Ho vokatr'izany, ny alahelonao dia ho lasa vaovao sy madio indray.
Ahoana ny famelana tulle?
Ahoana ny fanesorana ny kitapo avy amin'ny vy tsy misy tanam-pejy avy amin'ny fametrahana?
Inona no vinaingitra tsara indrindra?
Ahoana ny fomba hamolavolana ny kiraro?
Ahoana no ahafahako manadio ny fako ao anaty saika?
Folaka fanafody ho an'ny vitsika
Ahoana ny fomba hanadiovana ny kiraro nubuck?
Gnoseolojia - ireo fitsipika sy làlam-pandinihana maoderina momba ny epistemolojia maoderina
Ny voanjo matevina ao an-trano
Olon-menaka am-bozaka ao amin'ny gynécologie - fampiharana
Sarin'i Lionel Messi
Inona no tokony hohanina ho an'i Kate Middleton?
Sakafo miaraka amin'ny anana - resipe
Porridge ho an'ny sakafo voalohany fanampiny
Inona avy ny tombontsoa azo avy amin'ny paompy?
Voatso-menaka vita amin'ny tongolo gasy miaraka amin'ny tongolobe mena
Frida Giannini - talen'ny famoronana Gucci
Tavoahangy hazo sedera
Tranoben'ny lakozia avy amin'ny hazo mafy